Barnaamjiyada LMS ee bilaashka ah, bilaashka ah iyo kuwa furan: Tilmaamaha iyo Waxqabadka | Laga soo bilaabo Linux
ka Meelaha LMS ama Nidaamyada Maareynta Barashada Internetka, bixi a beddel wax ku ool ah oo wax ku ool ah, si loogu cusbooneysiiyo Hawsha baridda iyo barashada, taasi waa, qaab dhismeedka iyo / ama waxbarashada.
Qaar ka mid ah kuwan waxaa lagu abuuray Software bilaash ah iyo ilo furan iyo / ama si fudud bilaash. Qaab noocan oo kale ah oo qaar badani ka faa'iideysan karaan waqtiga, ilaha iyo awoodaha qiimo jaban ama eber ah, qaasatan xilliyada adag, sida midka aan maanta ku nool nahay adduunka, oo leh Coronavirus 19 ama COVID-19.
ka Meelaha LMS badanaa waxaa loo isticmaalaa qaybta tacliinta o ujeeddooyin waxbarasho / tababar, sidaa darteed waxaa jira xarumo badan oo waxbarasho ama ururo tababar, kuwa dowladeed iyo kuwa gaar loo leeyahay, sida Jaamacadaha, Kulliyadaha iyo Machadyada kuwa u muuqda inay u diyaargaroobaan kuwa xiiseynaya.
1 Bilaash, bilaash ah oo furan barnaamijyada LMS
1.2 Shiraac LMS
1.4 Kun Fasal
Bilaash, bilaash ah oo furan barnaamijyada LMS
Ka mid ah kuwa ugu caansan, mid kasta oo ka mid ah Bilaash, bilaash ah oo furan barnaamijyada LMS taas ayaa laga heli karaa suuqa hadda jira, waxaan xusi karnaa waxyaabaha soo socda:
Waa aalad furan oo furan oo lagu rakibi karo samaynta LMS Platform.
Waxaa lagu soo diyaariyay Kanada Hay'ada ATRC (Xarunta Adaptive Technology Resource Center).
Waxaa loogu talagalay PHP, Apache, MySQL, waxaana lagu rakibi karaa Windows, GNU Linux ama Unix Solaris.
Hadda wuxuu ku jiraa nooca 2.2.4, oo lagu heli karo in ka badan 30 luqadood, lana jaan qaadi kara nooca SCORM ee 1.2.
Waxay leedahay qalab elektiroonig ah oo wax lagu barto (e-learning), sida Barashada Bulshada, Blogs, Forums iyo Wikis.
Rakibideeda iyo isticmaalkeedu waa wax fudud, waxayna u oggolaaneysaa inay si fudud u la qabsato qaybaha iyo mowduucyada.
Waxay si aad ah diirada u saareysaa helitaanka iyo la qabsiga si loo damaanad qaado marin u helida iyo sahlanaanta isticmaalka dadka laga yaabo inay naafo yihiin.
Faa'iido darrada ugu weyn waa muuqaalkeeda aan caadiga ahayn, taas oo ah, is-dhexgalkeedii hore iyo mid aan fiicnayn. Intaas waxaa sii dheer, kuma xirna waddan ahaan qaababka lacag-bixinta / ururinta, ama tas-hiilaadka suuq-geynta dijitaalka ah. Iyo awooddeeda websaydh ee ka jawaab celinta ayaa xadidan.
Si aad wax badan uga barato qalabkan waxaad ka heli kartaa maxaa kucusub qaabka hada jira iyo sharaxaadda qaybaha intaas ka kooban.
Waa aaladda 'LMS Platform' ee ku saleysan ilaha furan, ee ku hoos jira rukhsadda AGPLv3.
Waxaa lagu soo saaray gudaha USA Ururka Horumarinta Software-ka "Instructure, Inc".
Waxay leedahay muuqaal garaafis leh oo saaxiibtinnimo leh, oo diiradda lagu saaray maaraynta isticmaaleyaasha iyo maamulka.
Waxay leedahay naqshad casri ah, oo leh adeegsi aad u fudud, taas oo ah sababta ay si ballaaran ugu adeegsadaan hay'adaha caanka ah hababka ay ku baranayaan elektaroonigga ah (e-learning).
Waxay leedahay awood websaydh wax ku ool ah oo waxtar leh, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon in loo isticmaalo aalado kala duwan. Intaa waxaa dheer, waxay taageertaa tikniyoolajiyadda cusub ee LTI (Qalabka Wax-barashada).
Waxay leedahay Dashboard leh tilmaamayaal heer sare ah oo lagu taageerayo geeddi-socodka barashada oo leh awoodo bulsheed oo aad u wanaagsan, taas oo ah, nidaamyo iyo qalab lagu dhiirrigeliyo barashada wadajirka ah.
Faa'iido darrada ugu weyn ayaa ah in loo isticmaalo xoogaa shaqeyn dheeraad ah kuwa aasaasiga ah, waa inaad iska bixisaa, iyo sidoo kale taageerada. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay fursado habeyn yar.
Si aad wax badan uga barato qalabkan waad heli kartaa goobta bulshada kale hada booskaaga GitHub.
Waxaa lagu soo saaray Isbaanishka hay'ad aan faa'iido doon ahayn "Asociación Chamilo".
"Chamilo Association" waxay dooneysaa inay horumariso horumarka ayna hubiso isticmaalka LMS Chamilo Platform, mid ka mid ah ujeedooyinkeeda ugu weyni waa dammaanad qaadka helitaanka waxbarashada bilaashka ah ee adduunka oo dhan.
Magaceeda Isbaanishka macnihiisu waa "Chameleon", oo ka tarjumeysa ujeedkeeda ah inay noqoto Barxad LMS bilaash ah, aadna loola qabsan karo isla markaana la heli karo inta badan, waana sababta ugu weyn looga adeegsado iskuulada, jaamacadaha iyo machadyada.
Waxay u oggolaaneysaa rakibidda, wax ka beddelka iyo abuurista cunsuryo iswaafajinaya si ay ula qabsadaan baahiyaha gaarka ah ee habka waxbaridda elektaroonigga ah (e-learning), iyadoo ay ugu wacan tahay xaqiiqda inay ku hoos jirto rukhsadda GNU / GLP v3.
Waxay ku saleysan tahay lambarka LMS Dokeos Platform. Waxaana hadda laga isticmaalaa in ka badan 180 dal oo adduunka ah, iyada oo in ka badan 20 milyan oo isticmaaleyaal ahi ay diiwaangashan yihiin.
Waxaa loogu talagalay PHP, Apache, MySQL, waxaana lagu rakibi karaa Windows, MacOS iyo GNU Linux.
Faa’iido darrada ugu weyn ayaa ah inay u baahan tahay in lagu dhex daro qalab kale si ay ugu awoodaan inay ku iibiyaan koorsooyinka internetka (Suuqa). Sidoo kale, sida laga soo xigtay adeegsadayaal badan, waxay u baahan tahay cusbooneysiin joogto ah, iyo waayo-aragnimada isticmaalaha ma ahan fasalka koowaad.
Si aad wax badan uga barato qalabkan waad heli kartaa Blog rasmi ah iyo qaybta ka "Su'aalaha joogtada ah" degelkeeda rasmiga ah.
Waa barta internetka LMS ee ku saleysan ilaha furan, oo bixisa websaydh bilaash ah oo leh Moodle.
Waxaa soo saaray hay'ad gaar loo leeyahay oo ay abuureen Taageerayaasha Moodle si ay ugu fidiyaan adeegyada LMS si bilaash ah, iyada oo la adeegsanayo qorshaha ganacsiga lacag-bixinta iyada oo loo marayo Google AdSense.
Adeegani wuxuu ku siinayaa suurtagalnimada inaad koorsooyinkaaga ugu soo dirto bilaash, oo aad uga dhigto mid ay u heli karaan dadweynaha xaaladaha qaarkood, sidaa darteed waxay faa'iido u leedahay mashaariic waxbarasho oo bilaash ah oo lacag leh
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad si fudud u abuurto bulshadaada barashada internetka, taas oo ah, fasal dalwad ah, oo leh subdomain u gaar ah, marin u helid aamin ah, mudnaanta maamulka oo dhameystiran iyo gebi ahaanba bilaash.
Faa’iido darrada ugu weyn ayaa ah in kaqeybgalayaasha (ardayda ama macaamiisha) ay la kulmaan xayeysiin, taas oo badanaa loo arko inay tahay mid xun ama tayo hooseysa iyaga. Intaas waxaa sii dheer, awooddeeda iibinta koorsadoodu way xadidan tahay, maadaama aysan la jaan qaadin qaybaha lacag bixinta, iyo bogga la abuuray lama habeyn karo, taas oo muhiim u ah in la siiyo qaabab badan oo heer ganacsi ah.
Si aad wax badan uga barato qalabkan waad heli kartaa degel rasmi ah meesha dhammaantiin Xaaladaha, qorshayaasha xayeysiinta iyo tabarucaadka, Xeerarka deactivating iyo tirtirka koorsooyinka, Abuuritaanka nuqulo nuqul iyo Isticmaalka ku dar ah. Oo waxaad ka heli kartaa boggaga lagu abuuray qalabka la yiraahdo adoo adeegsanaya waxyaabaha soo socda isku xirka, si loo baaro awooda buuxda ee ay leedahay.
Waxaa soo saaray aqoonyahan reer Australia ah oo cilmiga kombuyuutarka Martin Dougiamas, kaasoo soo saaray noocii ugu horreeyay ee xasilloon bishii Ogast 20, 2002.
Maanta, Mashruuca Moodle waxaa haga oo isku dubbarida markiisa, Xarunta Moodle, oo ah urur ay dhaqaale ahaan taageeraan shabakad caalami ah oo ka shaqeeya shirkadaha adeegga ama Moodle Partners.
Waxaa si gaar ah loogu talagalay inay siiso dhammaan kaqeybgalayaasha - barayaasha, maamulayaasha, iyo ardayda - oo leh hal nidaam adag oo aamin ah oo isku dhafan, oo leh jawi waxbarasho oo shaqsiyeed bilaash ama qiimo jaban.
Waa mid aad loo habeyn karo. Waxay taageertaa isku-darka ama horumarinta qaybaha iyo shaqooyinka caadada ah, sida, albaabbada lacag-bixinta, shirarka fiidiyowga, gamification.
Faa’iido darrada ugu weyn ayaa ah in muuqaalkeeda garaafka uusan ahayn mid aad u horumarsan ama u saaxiibtinimo leh. Ama horumar iskaa ah ama mid dibadeed, mid bilaash ah ama mid lacag ah, waa wax xal leh, oo ay ka mid tahay habayntiisa.
Si aad wax badan uga barato qalabkan waxaad ka heli kartaa qaybta ka "Ku saabsan" iyo qaybta "Su'aalaha joogtada ah" halkaasoo wax kasta oo lagama maarmaan ah lagu daboolayo oo si cad loogu sharxay qalabka la sheegay. Sidoo kale, maskaxda ku hay in kastoo Moodle wuxuu hayaa dukumiinti rasmi ah, waxaa jira xaddi aad u tiro badan oo macluumaad kale oo lagu kalsoonaan karo, maadaama ay leedahay a bulsho aad u tiro badan oo dad ah iyo meelo halkaas oo aad ka heli karto wax kasta oo aad u baahan tahay si loogu qanco isticmaalkeeda.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Meelaha LMS, waxaan kugula talineynaa inaad sahamiso websaydhka weyn ee Bit4 baro, taas oo aad ugu wanaagsan aaggan.
"Bit4learn waa xarun aqoon oo ku saabsan arrimaha elektaroonigga ah, hadafkeenu waa inaan awood u siino bixinta macluumaad qiimo leh oo taageeraya dhammaan kuwa doonaya inay naftooda u huraan gudbinta aqoonta iyagoo adeegsanaya teknoolojiyada khalkhalka leh.". Ku saabsan Bit4learn.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Plataformas LMS» bilaash ah, bilaash ah oo furan, kaas oo bixiya beddelaad Hufan oo wax ku ool ah, in la baro oo wax la barto, gaar ahaan xilliyadan, markii Telecommuting iyo teleeducation waa lagama maarmaan loona baahan yahay, inaad ahaato mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Nidaamyada LMS ee Bilaashka ah, Bilaashka ah iyo kuwa Furan: Astaamaha iyo Waxqabadka
Farxad! Miyaad naga xigan kartaa maqaalkaaga, maaddaama aad ka qaadatay tixraac ahaan mareegtadayada? Atte. Bit4learn
Jawaab Jonathan Cavero Linares
Salaan Jonathan! Xaqiiqdii, runtii waan ka helay boggaaga waana kan ugu weyn ee aan u qaatay aasaaska si aan u abuuro midkeyga. Sidoo kale u qaado saldhig 2 degello kale ah, oo lagu daray goobihii asalka u ahaa mid kasta oo ka mid ah Istaraatiijiyada LMS ee la baaray. Sidoo kale, sheeg iyaga oo ku dar tixraac ahaan qodobka si dadku ugu ballaadhiyaan macluumaad yar oo dheeraad ah oo ku saabsan Mashruucyada LMS websaydhkaaga. Inta soo hartay, guul badan iyo caafimaad wanaagsan dhammaan.
Nooca cusub ee LMDE 4 horey ayaa loo soo saaray waana kuwan isbeddelkiisa
Waxaa jiri kara saxmad internetka, sababtoo ah go'doominta adduunka oo dhan ee 'Covid-19'